Van Gaal oo ka cabsi qaba in la eryo - BBC Somali
Van Gaal oo ka cabsi qaba in la eryo
Image caption Van Gaal ayaa la kulmaya cadaadis ka haysta taageerayaasha Manchester United
Tababaraha Manchester United Louis Van Gaal ayaa sheegay in uu wadnaha farta ku hayo, oo haddii kooxdiisa looga guulaysto kulanka ay caawa la yeelanayso kooxda Derby County inuuba ka cabsi qabo in shaqada tababarenimo laga eryo.
Van Gaal oo ah 64 jir u dhashay Netherlands ayaa hadda ka hor la soo wariyay inuu qaddimay istaqaaladiisa markii Manchester United ay Southampton 1-0 uga adkaatay, arrintaaso uu ku tilmaamay inay tahay wax laga xumaado oo been abuur ah.
Suxufiyiinta ayuu ku eedeeyey inay hadda ka hor 3 goor ka been sheegeen oo ay weriyeen in la eryayo.
Wuxuu sheegay in su'aalaha ku saabsan mustaqbalkiisa loo weydiiyey si ixtiraam darro ah.
Cayaarta oo ka tirsan koobka FA ayaa ka dhici doonta garoonka iPro saacadda afrikada bari marka ay tahay 10:55 habeennimo.